Kuwanikwa kweMicrosoft yeGitHub ikozvino kuri pamutemo | Linux Vakapindwa muropa
Mumwedzi yapfuura takazivisa pano pane blog Zvinangwa zveMicrosoft zvekugona kutenga GitHubMazuva mushure mekuzivisa kuti nhau idzi dzaive dzepamutemo uye zvaive.
Kunyange zvakadaro izvi zvese zvinotora maitiro sezvo zvisiri zvese zviri nyore sezvazvinoratidzika sezvo Microsoft yaifanirwa kuwana kumwe kubvumidzwa uye ndozvakaitika.
Mushure mekuwana mvumo kubva kuEuropean Union vhiki rapfuura, Microsoft yasimbisa kuwanikwa kweGitHub , iyo yekugovana uye yekugovana sevhisi inoenderana nekodhi yeGit.
Kune 31 mamirioni evakagadziri avo parizvino vanoshandisa chikuva ichi kutora, kugovana uye / kana kutsvaga mapurojekiti nevamwe vanhu.
Chiziviso chepamutemo chekutora chave pamutemo uye Redmond software hofori yatove muridzi mutsva.
Microsoft yakavimbisa kuti mushure mekuwanikwa kwaizovharwa, yaizoramba ichitarisira GitHub sepuratifomu uye mabhizinesi akazvimirira. Naizvozvo, Microsoft inoita kuwanikwa kweGitHub pamutemo.
1 Rutsigiro rwekuvandudza
1.1 Zvigadzirwa zvakachengetedzwa
1.2 New forum
1.3 Dzivirira kutama
Kuwana ndechimwe chiratidzo chekuti sei Microsoft yakazvipira kuyedza kukwezva vanogadzira uye kuzviratidza semunhu waasina kwaakarerekera. kubatsira nemapurojekiti.
Izvi zvinodaro nekuti kunyangwe hazvo bhizinesi rayo repamhepo riine pundutso, Microsoft inewo mamwe makambani akati wandei, semuenzaniso Azure, iyo inokwikwidza neAWS neGoogle Cloud.
Ivo vese vanovimba zvakanyanya nekusasarura zvine hukama kune chimwe chikuva kana chimwe. Uye nekutora kweGitHub, Microsoft inotarisira kupa chimwe chiratidzo kune ino nzira.
GitHub ichachengetedza mweya wayo wekutanga wekuvandudza uye inoshanda zvakazvimirira kuti ipe chikuva chakavhurika kune vese vanogadzira mumaindasitiri ese.
Vagadziri vacharamba vachikwanisa kushandisa mitauro yekuronga, maturusi, uye masisitimu anoshanda avanosarudza kumabasa avo, uye vacharamba vachikwanisa kuendesa kodhi yavo pane chero sisitimu inoshanda, chero gore, uye chero chinhu.
Sezvakaziviswa kare, Nat Friedman, anga ave ari CEO weXamarin (imwe kambani inogadzira-software yakatarwa iyo yakawanikwa neMicrosoft muna2016), ichave CEO wekambani.
GitHub muvambi uye aimbova CEO Chris Wanstrath kuti ave nyanzvi yeMicrosoft uye ivo vachashanda pane software, mazano uye matanho. (Wanstrath akadzoka sa CEO mushure mekunge mubatsiri Tom Preston-Werner arega basa mushure mekuferefetwa muna 2014.)
Friedman, mune kapfupi katsamba, akati achazotanga basa neMuvhuro.
Akadzokorora zvakare zvakataurwa naMicrosoft panguva yechibvumirano: GitHub ichagadziriswa senzvimbo uye makambani akazvimirira.
Iyi ipfungwa yakakosha, sezvo pasingave nenzvimbo yakawanda yevanogadzira nezve kambani.
Vazhinji vakashamisika kana GitHub ichave yakasarudzika kana kutarisisa paneMicrosoft-based mapurojekiti kana zvigadzirwa.
Isu tinogara tichitsigira vagadziri mukusarudza chero mutauro, rezinesi, chishandiso, chikuva kana gore, "anonyora, achiona kuti kuchave nezvimwe zvekushandisa zvichauya. "Ticharamba tichivaka zvishandiso zvinonaka, zvinokurumidza, uye zvakapenyeswa zvinoda vanogadzira," akawedzera.
Akaratidzawo kuvandudza nekudyara muPepa Kucheka. Ichi chirongwa chakatangwa muna Nyamavhuvhu.
Iye anotarisira kugadzirisa vamwe vevanogunun'una vanogona kunge vaine GitHub.
Pfungwa iyi ndeyekubatsira kubata makuru ekugadzirisa zvigadzirwa. Saka GitHub inogona kuwana workaround. Uye zvakare, foramu yemhinduro inofanira kupihwa kuti ibatsire kuwana izvo zvinoda kuvandudzwa.
Microsoft iri kutsvaga mazano kana mikana yekudzivisa kusimuka kwekuvandudza, nekudaro kukosha kwekuramba usina kwawakarerekera hakusi kungochengeta vanogadzira mamirioni makumi matatu nerimwe.
Pakave nekuwedzera kwemamirioni matatu kubva chibvumirano chaziviswa. Chinangwa chikuru ndechekudzivirira kutama kwakawanda kuenda kune vanokwikwidza veGitHub, kusanganisira gitlab uye bitbucket.
Parizvino Microsoft ine zvakawanda zvekushandira, nekuti kunyangwe hazvo zvinangwa zvacho zvisina kwazvakarerekera, vanhu vazhinji vakafunga kusiya Git Hub.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kuwanikwa kweMicrosoft yeGitHub ikozvino kuri pamutemo
Kusatsigira zvematongerwo enyika? Microsoft haina kwazvakarerekera? Imwe kambani yakazvimiririra iyo inobatsirwa nebasa rayo, haina kwayakarerekera? Ok ... uye yepasi pemvura imhuka yegungwa.